Obodo kacha mma na Italy | Njem akụkọ
Mariela Carril | 26/04/2022 17:00 | Nduzi, Italia
Ị na-eche echiche ịga Italy? Lee obodo mara mma! Na ọtụtụ ndị mara mma obodo, ọ bụ n'ezie siri ike ịhazi ụzọ na-ahapụ ihe ọ bụla na-adịghị ahụ anya… Luckily, ị nwere ike dee anyị isiokwu taa banyere obodo kacha mma na Italy ma buru ha n'uche.
De North na ndịda, ndị a bụ ụfọdụ n'ime obodo kachasị mma na Ịtali. Ịga njem!
N'ihi na ọtụtụ ndị ọ bụ kasị ihunanya obodo na obodo, mara mma "Obodo nke ọwa mmiri", ya na ọmarịcha ụlọ ya, ọwa mmiri na-efegharị na ndụ omenala bara ụba. Ndị na-ese ihe na ndị hụrụ ya n'anya ahọrọla ya ma nọgide na-ahọrọ ya.
Venice nwere ihe karịrị 400 àkwà mmirigụnyere ndị ama ama Bridge nke rie ude, na ịnya gondola bụ ahụmịhe kachasị mma (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọnụ ala). Kedu mgbe ị ga-aga Venice? N'ime Eprel, Mee, Septemba ma ọ bụ Ọktọba nke bụ mgbe enwere ndị njem nlegharị anya ole na ole na okpomọkụ ka na-ekpo ọkụ ma dị ụtọ na Ọ naghị ekpo oke ọkụ.
Ọ bụrụ na-amasị gị ejiji ọ dịghị ihe yiri ya nkecha Milan, mecca maka ndị na-enwe mmasị ịga ịzụ ahịa. Ụlọ ahịa ndị dị na Site na Della Spiga na site na Montenapoleone ha dị ukwuu, ma ọ bụ eziokwu na Milan abụghị naanị ejiji. Ụlọ ihe ngosi nka ya bụ ihe mara mma, site na Katidral Milan, nke atọ kasị ukwuu n'ụwa, na-agafe ndị a ma ama Scala na ulo-elu-ya nile.
Oge kacha mma iji gaa Milan nakwa na Eprel, Mee, Septemba na Ọktọba na n'ihi otu ihe ahụ: ụbọchị ka na-ekpo ọkụ ma ọ bụghị nke ukwuu.
N'ozuzu, a naghị agụ ya n'etiti obodo kachasị mma na Ịtali ma ọ bụ mara mma, ma n'enweghị obi abụọ ọ bụla ọ bụ na ọ bụrụ na ị gaa na ị ga-achọpụta ihe kpatara ya. Turin dị n'ebe ugwu nke mba na ya ihe owuwu nwere ụlọ nke Renaissance, Baroque, Rococo, Art Noveau na Neoclassical… Mgbe ị na-aga n'okporo ụzọ ya, ọ dị ka a ga-asị na ị na-eme njem nka, mana o nwekwara square na ogige ntụrụndụ.
Nzụlite zuru oke bụ Alps, ọ dị naanị otu elekereha ebe ntụrụndụ ski na truffles ya. kedu ka ọ dị n'ebe ugwu kwesịrị ịga n'oge okpomọkụ, n'etiti June na August, ọnwa kacha mma na-ekpori ndụ ya mma n'èzí. Ma ee, ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu oyi ma ị nwere ike imeli ha, nakwa na oyi.
Ọ mara mma na ọtụtụ ndị njem nlegharị anya na-agakwa na ya, mana Trento bụ ebe mara mma nke kwesịrị ịdị na ndepụta a. nwere a ezigbo gastronomy, a mara mma eke gburugburu ebe obibi na onyinye dị iche iche maka ndị njem nlegharị anya.
N'oge oyi ị nwere ike ịme egwuregwu oyi na-ahụkarị dịka ski na snowboarding, àgwà nke snow ya bụ nke a ma ama na e nwere ebe ndị a ma ama dịka San Martino, Castrozza, Canazei ma ọ bụ Madonna di Campiglio.
Oge kacha mma n'afọ ileta Trento bụ site na Mee ruo Septemba, na okpomọkụ ya na-ekpo ọkụ na obere mmiri ozuzo, ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ime trekking, ọmụmaatụ. N'ụzọ doro anya, na oge oyi Ọ bụ eze nwanyị ski.
Ọ bụrụ na-amasị gị iri nri, nke a bụ obodo gị. ị ga-atọ ụtọ Pizza, pasta, cheese, anụ na mmanya Italian kacha mma. Nke kachasị mma, ọ bụghị obodo dị oke ọnụ, yabụ ị nwere ike ịpụ n'ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ nri na-emebighị obere akpa gị.
Ma ee, o nwere ihe ndị ọzọ ma e wezụga nri, cheta na UNESCO kwupụtara ya ogologo oge gara aga Ihe Nketa Uwa. Kedu mgbe ị ga-aga? N'oge opupu ihe ubi ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọọbụghị oke oyi ma ọ bụ oke ọkụ.
Anyị abanyelarị n'etiti Italytali na mmadụ enweghị ike ịme ndepụta nke obodo kachasị mma na obodo na-enweghị aha isi obodo ya. Nke a bụ ụlọ kacha mkpa nke Alaeze Ukwu Rom mbụ: Forum, Colosseum, Baths nke Caracalla na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, mana ọ bụkwa obodo nke Fontana di Trevi, Spanish Steps ma ọ bụ Vatican na akụ ya.
Na-agbasi ike Ọ bụ agbata obi ndị Rom ịnọ n'ehihie, enwere ọtụtụ ụlọ ochie, okporo ụzọ mara mma na ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ebe niile. Rome bụ obodo ị nwere ike ịgagharị mgbe niile na mmiri ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ bụ oge kacha mma ileta.
Obodo ọkacha mmasị m. Omenala na ihe owuwu nke Florence fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị atụ. bụ nke obodo kacha mma na Tuscany, obodo Michelangelo na Dante, Galileo na Raphael. ị ga-agwụ ike gaa na ngosi ihe mgbe ochie na veranda, kamakwa ịgagharị na ha okporo ụzọ etiti etiti ma ọ bụ gbaa igwe kwụ otu ebe.
A ga-ahụrịrị Duomo na Ụlọ elu Bell, ọ bụrụ na ị chọrọ Devid, bú Obí eze ma ọ bụ ubi ndị mara mma Obí eze. Mana nke a bụ nke kachasị ewu ewu mgbe n'ezie ihe kacha mma bụ ịga ije, na-aga karịa, na-eje ije. Ihe niile dị ebube.
Oge kacha mma iji gaa na Florence bụ site na Mee ruo Septemba ebe ọ bụ na ọ na-ekpo ọkụ na e nwere ọtụtụ ndụ n'èzí. Echefula iri nri na Central Market.
Ọ bụrụ na ịnọlarị na Tuscany ị nweghị ike ịhapụ Siena n'ụzọ. Ọ mara mma na nke ịhụnanya, nwere okporo ámá na ụlọ ochie. na Katidral Siena Ọ bụ ịma mma nke ụdị gothic ị gaghị echefu.
Ọ bụrụ na ị nwere ike họrọ ụbọchị, nke kacha mma bụ gaa etiti ruo mbubreyo udu mmiri, n'etiti Eprel na Mee, ma ọ bụ n'isi mmalite nke ụbịa, n'etiti Septemba na Ọktọba.
Anyị gara ozugbo n'ebe ndịda Ịtali, bụ́ akụkụ kasị daa ogbenye ná mba ahụ ma nwee ọtụtụ ịma mma. etiti etiti. Bari bụ amara na a gastronomy na-atọ ụtọ na nke ọma nke ọdụ ụgbọ mmiri. Na mgbakwunye, ọ nwere nnukwu osimiri na mmiri na-acha anụnụ anụnụ.
Bari bụ obodo akwụkwọ ozi ebe ihe kacha mma bụ iri nri na ije ije na sunbathe n'otu n'ime osimiri ya. Ya mere, n'enweghị obi abụọ, gaa mgbe ụbọchị kacha ogologo, na Julaị. Eprel adịghị adaba n'ezie n'ihi na ọ bụ ọnwa kachasị mmiri n'afọ na maka ndị hụrụ osimiri na oke osimiri enweghị ozi ka njọ karịa mmiri ozuzo.
Site n'ọdụ ụgbọ mmiri ya pụọ Ụgbọ mmiri na-aga Greece, Croatia, Montenegro ma ọ bụ Albania.
La Amalfi n'ụsọ oké osimiri Ọ na-abụ nnukwu ebe ọ na-aga. Ọ bụ akwụkwọ ozi mara mma nke ịma mma niile nke Italy nwere ike ịbụ yana n'etiti ọtụtụ obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri dị ebe a, ihe ịrụ ụka adịghị ya na Positano bụ pearl. Nwee ndụ abalị, ezigbo gastronomy, ezigbo mmanya na echiche kacha mmaee Ọ bụrụ na ị gbazite Vespa ị ga-enwe oge kacha mma.
N'ezie, ọ bụghị ebe dị ọnụ ala mana ị nwere ike nweta ya mgbe ọ bụla site na itinye obere ego. Ọ bụ ezi echiche gaa Positano na mmiri, n'etiti Mee na June, na-agbalị mgbe niile ka ị ghara ịga n'oge dị elu n'ihi na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na ọnụ ahịa na-aga n'elu ụlọ.
Ọ dị mma na ndịda obodo na Ọ bụghị nnukwu obodo. Ọ bụrụ na anyị atụnyere Matera na obodo ndị ọzọ na-ewu ewu na Ịtali, ọ ga-adị ka obere na ndị njem nleta ole na ole, ma nke ahụ bụ echiche mgbe ụfọdụ, ọ bụghị ya?
Matera Ọ dị mma na ọnwa okpomọkụ, n'etiti Mee na Octobern'ihi na mmiri anaghị ezo nke ukwuu.
Palermo bụ otu n'ime obodo kacha mma na Sicily, bụ n'ezie isi obodo omenala na akụ na ụba ya ma nwee ihe niile maka ndị njem nleta. Ha Ahịa n'okporo ámá Ha dị oke mma, karịsịa Capo na Vucciria, nwere ngwaahịa ọhụrụ na ọtụtụ ihe ncheta ịzụta na inyefe.
N'etiti Eprel na June, a na-atụ aro nleta ahụ., mgbe ụbọchị na-ekpo ọkụ ma ọ bụghị mmegbu.
O doro anya na ndepụta a na-agbakọta naanị ụfọdụ n'ime obodo kachasị mma na Italy. enwere ọtụtụ ndị ọzọ!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Italia » Obodo kacha mma na Italy
Obodo ndị mara mma nke Segovia